United Oo Guul Wax Ku Ool Ah Ka Gaartay Crystal Palace , Rashford Wacdaro Ayuu Dhigay – Kooxda.com
HomePremier LeagueUnited Oo Guul Wax Ku Ool Ah Ka Gaartay Crystal Palace , Rashford Wacdaro Ayuu Dhigay
United Oo Guul Wax Ku Ool Ah Ka Gaartay Crystal Palace , Rashford Wacdaro Ayuu Dhigay
Goolal cajiib ah oo ay kala dhaliyeen Marcus Rashford iyo Anthony Martial ayaa ka caawiyay Manchester United inay 2-0 ku garaacdo kooxda Crystal Palace xilli VAR ay badbaadisay labo jeer.
Guusha ay Man United gaartay ayaa la micno ah inay ku dhibco yihiin kooxda kaalinta 3aad ee Leicester City iyadoo dagaalka loogu jiro boosaska Champions League uu xiiso sii yeeshay.
Laakiin United ayaa u muuqatay kuwa daalan kulankaan iyagoo iska caabin kala kulmay Palace kuwaasoo laga badiyay kulankii lixaad oo isku xiga iyagoo ku jira kaalinta 14aad halka United ay ku jirto kaalinta afaraad.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa ku bilaabatay si aayar ah, laakiin xamaasada ciyaarta ayaa sarre u kacday ka dib biyo cabkii ugu horeeyay, waxaana ciyaarta la go’aansaday ka hor inta aysan qeybta hore dhamaanin.
Markii ugu horeysay Victor Lindelof ayaa u muuqday mid qalad xerada ganaaxa kula galay Wilfried Zaha laakiin garsooraha ayaa tilmaamay inaysan rigoore aheyn.
Dhamaadkii qeybta hore Man United ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta markii uu Bruno Fernandes ukubad u dhiibay Rashford kaasoo seexiyay daafacyada iyo goolhayaha Palace ka hor inta uusan si kalsooni leh kubada shabaqa u dhex dhigin.
Palace ayaa si fiican ku bilaabatay qeybtii labaad iyagoo mooday inay daqiiqadii 55aad ciyaarta barbareeyeen ka dib gool uu u dhaliyay Jordan Ayew laakiin VAR ayaa diiday isagoo miilimitir offside ahaa.
Wax yar ka dib kubad ay isweydaarsadeen Rashford, Fernandes iyo Martial ayaa u ogolaatay xiddiga Faransiiska inuu shabaqa soo taabto isagoo soo gabagabeeyay ciyaarta.
Man United ayaa muuqbeeshay wixii ka danbeeyay goolkaas iyagoo ilaashanayay labada gool. Laakiin waxay u baahan yihiin inay tamartooda dib u helaan madaama ay Wembley ku wajahayaan Chelsea koobka FA Cup.
Daawo: Qaabkii Ay Xiddigaha Real Madrid Kor Ugu Qaadeen Koobka Horyaalka La Liga Oo Ay Ku Guulaysteen
5 Arin Oo Real Madrid Ka Caawisay In Ay Ku Guuleystaan Horyaalka Spain, Barcelona Sabab Ayay U Aheyd